“Sirop” natoraly ho an’ireo zaza mikoha-dava
Manelingelina ny ankizikely sady tsy mampahazo aina azy ireo ny kohaka. Raha maina ny kohaka dia mila hamaky tratra sady manelingelina be mihitsy. Raha masaka indray anefa ilay izy dia mandrirotra sy manentsina ireo taova.
Ireto karazana “sirop” natoraly ireto dia hanampy an’ireo Neny manana zanaka taizan-kohaka rehefa mangatsiaka toy izao ny andro. Ny zaza maherin’ny herintaona ihany no azo omena azy ireto.
Sirop amin’ny tongolo, ho an’ny kohaka
Tena miasa be amin’ny fanasitranana ny olana eo amin’ny taovam-pisefoana sy ny lalan-drivotra ny tongolobe. Voasana sady tetehina boribory manify ny tongolobe miisa 6. Atao ao anaty vilia jobokely dia mamiana amin’ny tantely in’efatry ny sotro fihinanana. Afangaro tsara dia atao amin’ny evo-drano mahamay tsara (bain marie). Saronana ary avela hahazo hafanana eo, mandritra ny ora roa. Tantavano avy eo ary iny ranony iny no omena ny zaza mikohaka. 1 sotro fihinanana isaky ny adin’ny roa na adin’ny telo no omena azy. Azo tahirizina ao anaty vata fampangatsiahana mandritra ny 24 ora.
Voasarimakirana + tantely + sakamalaho, ho an’ny tenda
Raha somary mangidihidy ny tenda, misy lelo mipotsaka kely foana ny orona, vizambizana… dia ity fangaro ity andramana :
Tantely 4 sf
Silahana boribory manify aloha ny voasarimakirana. Atokana ao anaty “bocal” kely avy eo. Silahana manify madinika ihany koa ny sakamalaho dia akambana amin’ireo voasarimakirana. Arotsaka ao avy eo ny tantely 4 sf. Somary afangaro kely izy rehetra dia saronana amin’izay ilay “bocal” mba hihidy tsara. Apetraka ao anaty vata fampangatsiahana avy eo ary avela ao mandritra ny 24 ora. Fangaro somary madinty sy miraikidraikitra no azonao eo.
Maka 1 sotro fihinanana amin’ilay fangaro dia atao ao anaty kaopy efa misy vovoka dite maitso kely. Tapohana rano avy nangotraka avy eo izany dia aroina tsara ary sotroina iny rano 1 kaopy iny. Raha vao mangidihidy ny tenda, manomboka misy lelo kely ny zaza, mareforefo sy tsy mahazaka andro mangatsiaka sy mivadibadika, dia azo omena an’ity fangaro ity avy hatrany. Mety ho an’ny olon-dehibe koa izy ity fa tsy mety ho an’ny zaza latsaky ny 1 taona.